Home Wararka Al Shabaab oo toogtay 10 qof oo ay ku soo eedeeyeen...
Al Shabaab oo toogtay 10 qof oo ay ku soo eedeeyeen basaasnimo
Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya Gobolka bay, Ururka Argagaxisada ee Al-Shabaab ayaa shaaciyay in ay toogasho ku fuliyeen 10 qof oo ku eedaysnaa arrima ku saabsan basaasnimo. Warbaahinta taageerta Al-shabaab ayaa ku warrantay in fagaare ku yaalla degaanka Buura-fuulaay ee Gobolka Baay lagu toogtay shan kamid ah dadkaas oo ku eedaysnaa basaasnimo sirdoon caalami ah.
Dhanka kale, Al Shabaab waxa ay sheegeen in ay degmada Jilib ee Gobolka Jubada dhexe ku toogteen shan nin oo lagu eedeeyay, in ay la shaqaynayeen sirdoonka Maraykanka. Sidoo kale, Al-shabaab ayaa maalin ka hor degmada Saakow ee Gobolka Jubada dhexe ku toogtay lix ruux oo ay ku tilmaameen basaasiin la shaqaynayay sirdoonka Maraykanka.
Previous articleFahad Yasin oo qaab dhuumaaleysi ku tagay Qatar
Next article41 Al-Shabaab militants killed in foiled attack in Somalia
R/w Abiy oo magacabay Madaxweynaha ismaamulka Tigreeyda
(Daawo) Xil. Cabdi Cali oo ka mid ah xildhibaanadii wax ka...